नेकपाका दुई पाइलटलाई यसैगरी चलाउन दिने हो भने, गणतन्त्रको जहाज दुर्घटनामा पर्छ - हिमाल दैनिक
आजको दिनमा राष्ट्रिय मेलमिलापको केन्द्रीय स्वार्थ भनेको यो संविधानलाई जोगाउने र त्यसअनुसार अघि बढ्ने हो, त्याे जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनु पर्छ
१६ पुष २०७५, सोमबार २०:०४
आज भन्दा ४३ वर्ष अगाडि पार्टीका नेता बी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंहले भारतको निर्वासन त्याग्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिने निर्णय गर्नु भयो। त्यो निर्णयको स्वामित्व देशभरीका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले लिनु भयो। त्यो त्यतिबेलाका नेताहरुको काम गर्ने शैली थियो। निर्णय नेताले गर्नु भएको थियो जसलाई सबैले स्वामित्व लिए।
खासगरी जननायक बी.पी. कोइरालाले निर्णय गर्नेबेला उहाँ कसरी त्यो निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो भन्ने कुरा नकेलाइकन त्यस घटनाकाबारेमा एकांङ्गी ढंगले मात्रै विश्लेषण गर्यौँ भने हामी गलत निश्कर्षमा पुग्छौँ।
बी.पी. कोइराला एउटा विचारक, चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। समकालिन नेपालमा जतिपनि नेताहरुको चर्चा परिचर्चा गर्छौँ तर, बी.पी. कोइरालाको विचारबाट प्रेरित मात्र होइन हामी प्रभावित पनि हुने गर्दछौँ। त्यतिबेला उहाँले राखेको विचारले आजको घटनालाई र आजको सन्दर्भलाई प्रभावित गर्ने कुराले नै बी.पी. कोइरालालाई आम नेता र राजनीतिकर्मी भन्दा फरक कोटीमा राखेको छ, जसलाई हामी जननायक शब्दले सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ।
बी.पी. कोइराला पार्टीको सभापति मात्र होइन, नेता पनि हुनु हुन्थ्यो। उहाँ पार्टीको सभापति नहुँदा पनि यसको नेता हुनु हुन्थ्यो। जीवन्त पार्टीको नेताले प्रत्येक दिन निर्णय गर्दै गर्दा बी.पी.को विचार र चिन्तनले तत्कालिन अवस्थामा एउटा प्रभाव पार्दछ। यसरी निर्णय गर्दै गर्दा आदरणीय सभापति यहिँ हुनु हुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छ, त्यो निर्णयलाई हरेक राजनीतिक घटनाले प्रभावित गरेको हुन्छ।
यद्यपी आफूले गरेका निर्णयहरुलाई यो कोणबाट हेरेनौँ भने हामी गलत निश्कर्षमा पुग्छौँ। राष्ट्रिय मेललिापको सन्दर्भमा छलफल गर्दै गर्दा हामीसँग एउटा ऐतिहासिक चेतसँगै आलोचनात्मक चेत पनि हुन आवश्यक छ।
केहिदिन अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नु भयो, ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको कारणले गर्दा देशको विकास हुन सकेन। कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था भएको भए ड्याम ड्याम निर्णय गरी देश विकास हुन सक्दथ्यो।’ यहि कुरा २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले पनि भन्नु भयोः कि मेरो लक्ष्य देश विकास गर्नु हो तर, यो व्यवस्थाबाट देशको विकास हुन सक्दैन।
तर, २००३ सालमा नै बी.पीं कोइरालाले एउटा सानो लेखमार्फत भन्नु भयोे कि, जनताबाट निर्वाचित हुने शासन पद्धतीले मात्रै जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्दछ र मुलुकलाई सार्वभौम राख्न सक्दछ। अर्थात जहाँ नागरिकको अधिकार हुँदैन त्यहाँ नागरिकले व्यक्तिगत प्रयत्न मात्र होइन सामूहिक प्रयत्न पनि गर्दैनन्। नागरिकको अधिकार छैन भने त्यहा सदभाव हुँदैन। नागरिकको अधिकार छैन भने त्यहाँ एकता हुँदैन। त्यसैले बी.पी. कोइरालाले फरक फरक सन्दर्भमा फरक फरक ढंगले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नु भयो।
राष्ट्रियता मजबूद गर्ने भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। अधिकार सम्पन्न भएका जनताकोबीचमा एकताको भावना हुन्छ। त्यसैले बी.पी. कोइराला सधैँ भन्नु हुन्छः पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको भूगोल नेपाल हो। तर, त्यति मात्र होइन, यो नेपालभित्र बस्ने जनताका दैनिक समस्या र त्यो समस्यासँग जुध्ने सामूहिक प्रयत्न र उत्साह नै राष्ट्रियताको भावना हो भनि परिभाषित गर्नु भएको छ।
त्यहि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायो भने मात्रै राष्ट्रियता मजबूद हुन्छ भन्ने कुराले नै बी.पी. कोइरालालाई कहिले जेलमा लिएर जान्छ त कहिले प्रवासमा त कहिले हतियार उठाउने राजनीतिक व्यक्ति बनाउँछ त कहिले गान्धीवादी अहिंसाको पथमा लैजान्छ। त्यहि भावनाले बी.पी. कोेइरालालाई फर्काएर मृत्युदण्डसम्म हुन सक्ने सात वटा मुद्दाका बाबजूद स्वदेश फर्काएर ल्याउँछ।
जतिबेला भारतले सिक्किम विलय गराएको थियो त्यतिबेला यहाँ मात्र होइन शितयुद्धको प्रभाव विश्वभरी नै थियो। त्यो चरणमा बी.पी. सहासकासाथ नेपाल फर्किनु भयो। त्यतिबेलाको विशेष सन्दर्भमा उहाँले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु भयो। त्यो भन्दै गर्दाको बेलाको सन्दर्भमा मेरो आफ्नै बुझाइ र व्याख्या छ। उहाँले राजाको सन्दर्भमा स्पष्ट सन्देश दिँदै भन्नु भयोः कि म जनताको अधिकारवीना नेपालको राष्ट्रियता मजबूद हुँदैन भन्ने ठान्दछु। तिमीलाई जनताको अधिकारको मतलब छैैन तर, कम्तिमा तिमीलाई भूगोलको त मतलब छ होला नि।
तिमीले जनताको अधिकार माग्ने मेरो घाँटी रेट्न खोज्दछौ भने त्यतिबेला जनताको अधिकार मात्रै रेटिदैन। तिम्रो घाँटी पनि रेटिन्छ। किन कि तिमीलाई मतलब भएको भूगोलमा त्यी जनता पनि छन् भन्दै बी.पी. कोइरालाले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने प्रसंगलाई त्यतिबेला त्यो ऐतिहासिक चेतका साथ भन्नु भएको थियो।
यो विषयलाई हामीले बेला बेलामा आफ्नो पाराले बुझेर अथवा विगारेर भन्ने गर्छौ, कि कांग्रेसले बी.पी.को बाटो छोड्यो। गलत। बी.पी. कोइरालाले त्यहि बेलामा भन्नु भएको थियो यो प्रसंग पनि सम्झौँ, कि आजको युगमा राजसंस्थालाई बोकेर हिड्नु भनेको मरेको लास बोकेर हिड्नु जत्तिकै छ भनेर भन्नु भएको कुरा नबिर्सौँ। कहिले हामी धर्मका नाममा कहिले राजाका नाममा यो सन्दर्भलाई जोडेर बी.पी. कोइरालाले यो वा त्यो भन्नु भएको थियो भन्ने कुरा आफ्नो मन लाग्ने इतिहासको पुस्तकको आफूलाई मनलाग्ने पानाको मन लाग्ने हरफ उद्दरण गरे जस्तै हो। त्यो गर्छौ भने आज अर्कै मञ्चमा कमल थापा राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेसलाई गिज्याएर पञ्चायतको मण्डलले नेपाली कांग्रेसलाई सिकाउनु पर्दैन।
नेपालको राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ। जुन पार्टीको नेता जीवन पर्यन्त त्यहि मण्डले प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्नु पर्यो, जसको कारणले यो पार्टीका कैयन नेता कार्यकर्ताले जेलजीवन विताउनु पर्यो, जसको कारणले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि यति लामो संघर्ष गर्नु पर्यो। यदि २०१५ सालको बी.पी. कोइरालाको सरकार स्थायी भएको भए आज ६० वर्षसम्मको ऐतिहासिक अवसर गुमाउनु पर्दैनथ्यो। त्यहि प्रवृति नबुझी वैचारिक अलमलका कारणले गर्दा कहिले काँही धरमराउने काम भएको होला।
तर, हामीले यसरी सोचौँ कि, आज बी.पी. कोइराला भएको भए के गर्नु हुने थियो? आज उहाँ हुनु भएको भए, हिँजो हिंसाको चक्रव्यूहमा परेको नेपाललाई स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो। बिचमै असफल भएको संविधान सभालाई सुशील कोइरालाले सफल बनाउनु भयो र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्नु भयो। त्यसपछि आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाले सफलता पूर्व तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधानलाई जोगाउनु भयो। यो अवस्थामा बी.पी. कोइराला भएको भए भन्नु हुन्थ्योः आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको यो संविधानलाई जोगाउने हो। न दायाँ न बाया। हाम्रो अगाडिको बाटा भनेको यहि संविधानले तय गरेको बाटो हो। यत्रो दुःख गरेर संविधान बनाई यहाँसम्म आइसके पछाडि हिँजो हतियारको राजनीतिमा विश्वास गर्ने माओवादी पनि यहाँसम्म आइसके पछाडि आजको दिनमा राष्ट्रिय मेलमिलापको केन्द्रीय स्वार्थ भनेको यो संविधानलाई जोगाउने हो। यो संविधान अनुसार अघि बढ्ने हो।
यसको जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको हो त्या जिम्मेवारी लिनु पर्छ।
त्यो भन्दा बढि ठूलो खतरा हामीले दुर्भाग्यका साथ भन्नु पर्छ हाम्रा हिँजोका सहयात्री साथीहरु जोसँग अहिले पनि मित्रवत सम्बन्ध छ, हामी त मित्रै भन्छौँ, उहाँहरु प्रतिस्पर्धी हुन्, खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जो अहिले दुई तिहाइ बहुमतको साथ सरकार चलाइरहेको छ, त्यसबाट छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान जोगाउने भनेको यहि व्यवस्थालाई जोगाउने हो। गणतन्त्र आफैँमा छुट्टै विचारधारा, चिन्तन र मान्यता हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यता छैन। यो सत्य कुरा हो। त्यतिमात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जेट चलाउनु दुइटा पाइलट हुनुहुन्छ। दुई पाइलटमध्ये एउटालाई संघीयता पटक्कै मनै पर्दैन, अर्को पाइलटले अस्तिको संसदमा भन्नु भयोः मलाई लोेकतन्त्र मन पर्दैन। इन्जिन गणतन्त्रको छ तर, त्यो इन्जिन चल्दै चल्दैन। दुईटा पाइलट पनि छन् तर, एउटालाई संघीयता मन पर्दैन, अर्कोलाई गणतन्त्र मन पर्दैन। उहाँहरुलाई यसैगरीकन चलाउन दिइरहने हो भने यो प्लेन दुर्घटनामा पर्छ।
यसैकारण यो कांग्रेसको जिम्मेवारी हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जहाज चलाउन सक्ने शक्ति बढारिएको बेलामा त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो।
यो बेलामा कांग्रेस निदाएर बस्न सक्दैन। यससँगै यत्रो जनशक्ति निराश भएर बसिरहेको छ। महिला, दलीत, जनजाति लगायत यावतको अधिकार आफूले चाहे अनुसार पाएनौँ भनि बसिरहेका छन्। संविधान निर्माण र स्थायी सरकार गठन पछाडि देशभित्रै रोजगारी पाइन्छ कि भनेर बसेका युवाहरु फेरि देशभित्र भविश्य छैन भन्दै प्रत्येक दिन बाहिरिने अवस्था छ। आज नेपाली कांग्रेसले एकता गर्ने भनेकेो त्यी युवाहरुलाई स्वदेशमै अवसरकोे खोजीका लागि गर्ने हो। आज कांग्रेसले गर्ने एकता भनेको तमाम नेपाली जात, जाति, भाषा भाषीका जनतासँग गर्ने एकता हो।
नेपाली कांग्रेसको एकता आजको दिनमा सबै परिवर्तनको पक्षमा रहेका जनताको पक्षमा गर्ने एकता हो। आज पुस १६ गते हामीले मेलमिलाप दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालका नागरिकको एउटा ठूलो पंक्ति आज आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई देखेर निराश भएर शीर निहुराएर बसेको छ। आज त्यहि दिन हो जुन दिन प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज चढ्नका लागि निम्ता गर्नु भएको थियो। यो हाँस्ने विषय मात्र होइन। देशको प्रधानमन्त्रीमाथि आज प्रत्येक नागरिकलाई शंका लागिरहेको छ कि मेरो देशको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको संख्याको ताकत छ तर, देश चलाउने क्षमता छ कि छैन। उनको क्षमताको बारेमा प्रश्न उठाएर निराश भएका तमाम नागरिकलाई एकता गरी हिम्मत दिने बेला हो यो।
सरकार बरालिए पनि प्रतिपक्षी छ, सरकार ओरालिए पनि कांग्रेस छ र तिम्रो कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने ताकत कांग्रेसले राख्छ भनि ढाडस र विश्वास दिलाउने दिने बेला हो।
अन्त्यमा राष्ट्रिय एकताको यो सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रको मेलमिलाप र एकताकोबारेमा हामीले भर्खरै महासमितिको बैठक सम्पन्न गर्यौँ। महासमितिको बैठक टुंग्याउँदै गर्दा श्रृद्देय पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले एउटा महत्वपूर्ण लाइन भन्नु भयोः हामीबीच डिप लभ छ। त्यसपछि म काभ्रेको मण्डनदेउपुरदेखि चन्द्रनिगाहपुरहुँदै हिँजो भरतपुरको कार्यक्रम सकाएर काठमाडौं आएँ।
पार्टीका नेताहरुबीचको सम्बन्धमा दुई नेता उभिएर हामीबीच गहिरोे प्रेम छ भन्दै गर्दा देशभरीका साथीहरुमा उर्जाको लहर आएको छ। देशभरीका साथीहरु अहिले आफूभित्रका सानातिना समस्या र अलमलबाट बाहिर आउँछौँ भन्ने उर्जाको सञ्चारप्रवाह भएको छ।
पार्टी चल्ने आधार भनेकै त्यहि हो। आर्यघाटमा कोहि आफन्तको अन्त्यष्टिमा सहभागी हुन जाँदा छेउमा अर्को नचिनेको मान्छेको दाहासंस्कार भइरहेको बेलामा कुनै साथीले जय नेपाल भन्यो भने हाम्रो आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तै ठान्छौँ। अस्पतालमा आफन्त विरामीलाई भेट्न जाँदै गर्दा पनि कुनै अर्को अपरिचित विरामीको कुरुवाले जय नेपाल भन्दै गर्दा आफन्त भन्दा पहिले उसकोबारेमा सोधखोज गर्छौँ। यो हो प्रेम। तलदेखि माथिसम्म एक हुन्छौँ। यहि भावनाले पार्टीलाई जोगाउने हो।
यहि प्रेमको चर्चा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले गर्नु भएको छ, सभापतिले गर्नु भएको छ। तर, (Love is looking to each other) अर्थात प्रेम गर्दा दायाँ वायाँ बसेर एक अर्कालाई हेर्ने गरिन्छ। (But marriage is looking forward to the same direction) विवाह भनेको दुई जनाले नै एउटै दिशातर्फ हेर्ने हो। सबै प्रेम विवाहमा टुंगिदैन र सबै विवाहमा प्रेम हुँदैन। हामीलाई प्रेम पनि चाहिएको छ।
तर, घर केबल प्रेमले मात्रै चल्दैन। घर चलाउन पद्धती पनि चाहिन्छ। प्रेम र पद्धती मिलेमात्रै घर चल्दछ। त्यसैले आज प्रेम सुरु भएको छ अब हामीले पद्धती बसाल्नु पर्दछ। हाम्रोे बीचको एकता र मेलमिलापको आधार भनेको हामीबीचको प्रेम पनि हो र संस्थागत नियम र कानुन बमोजिम विश्वासकासाथ जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरी विवाहको रुपमा सम्बन्ध पनि चाहिएको छ र प्रेमको भावना पनि चाहिएको छ। प्रेमको भावनामा विवाहको जस्तो सम्बन्ध भएपछि यो कांग्रेसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन।
(४३औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)
Prevपछिल्लोओली सरकारले मठभेडको राजनीति चाहेको छः देउवा
अघिल्लोवैशाखदेखि उपत्यकामा ३ सय बिजुली बस सञ्चालन हुनेNext